Guddoomiyihii Gobolka Banaadir Eng. C/raxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yariisow) oo geeriyooday
Allaha u naxariistee Guddoomiyihii Gobolka Banaadir Eng. C/raxmaan Cumar Cismaan
Qadar :- waxaa goor dhow Isbitaalka Hamad ee magaalada Doxa ee xarunta dalka Qatar ku geeriyooday Allaha u naxariistee Guddoomiyihii Gobolka Banaadir Eng. C/raxmaan Cumar Cismaan oo ku magac dheeraa (Eng. Yariisow) wuxuuna u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay Xarunta Gobolka Banaadir.
Allaha u naxariistee Guddoomiyihii Gobolka Banaadir Eng. C/raxmaan Cumar Cismaan ayaa mudo isbuuc ah waxaa lagula tacaalayey isbitaalka Hamad ee magaalada Doxa .